Euro Rori Simulator 2 ine kuwedzera kutsva | Linux Vakapindwa muropa
Pandakatanga kunyora pane ino blog, makore mashoma apfuura, imwe yenhau kana zvinyowani zvakanyanyisa kutora pfungwa kune waanoshanda naye uyo asisiri kunyora kuLxA kwaive kuvhurwa kweEuro Truck Simulator yeLinux, kwete chete nekuti panguva iyoyo iyo mitambo yemavhidhiyo yeLinux yaive isipoAsi nekuti zita racho raizivikanwa chaizvo uye zvaishamisa kuti musimudziri mukuru akadaro ane hanya nekutsigira distros. Nekudaro, izvo zvachinja zvakanyanya mumakore achangopfuura sezvo ndanga ndichikuudza pachangu, kuti ini ndaona kufambira mberi uku mukutamba kwenyika yekutanga-ruoko ...
Zvakanaka, nhasi ndini ndinotarisira kunyora idzi nhau nezve kuwedzera kutsva Beyond the Gungwa reBaltic kuuya kumutambo wevhidhiyo Euro Truck Simulator 2. Kana iwe usati uchizviziva, ndiyo yakanakisa rori simulator iripo, uye haisi yeWindows chete mapuratifomu, asi zvakare yeLinux. Pamusoro pezvo, ikozvino nekuwedzera uku unenge uine zvakawanda zvirimo uye nhau kuitira kuti ugova uine hwaro hwesi uye waida kuwedzera kugona kwayo.
Euro Rori Simulator 2 yakaburitswa mu2012, nekuburitswa kweLinux rutsigiro muna2013 mune beta fomu. Ipapo SCS Software yakaenderera mberi nerutsigiro nekusimudzira uye DLC kuburitswa, senge iyo yakavhurwa nguva pfupi yadarika. Iko kuwedzera Beyond yeGungwa reBaltic iyo inosanganisira mepu nyowani muLithuania, Latvia, Estonia uye zvikamu zvekumadokero kweRussia nekumaodzanyemba kweFinland. Muchiitiko chekuti nyika yakakura yemigwagwa yekutyaira marori yaitaridzika kunge diki kwauri.
Inosanganisirawo makambani matsva makumi matatu nemaindasitiri, zvigadzirwa, nezvimwe, pamwe nekuvandudza uye zvitsva nerutsigiro rweSteam Cloud, kugadzirisa mune fizikiki yemutambo uye yakareba etc. Kana iwe usingazvizive, ini ndinokukoka iwe kuti uzviedze, unogona kuzviwana muzvitoro zve ValvesSteam uye zvakare Humble Store, pamwe neayo maDLC.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » Zvirongwa » chiutsi » Euro Rori Simulator 2 ine kuwedzera kutsva
Icho "shanduko" chinhu chaive nemaune kana kutsvedza?
Ini ndinoda euro rori
Harmony: pane mutambi wemimhanzi nerutsigiro rwegore